विगत केही वर्षदेखि हाम्रो मण्डली झन्-झन् उजाड हुँदै गएका छन्। दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूले आफ्नो विश्‍वास र प्रेम गुमाइरहेका छन्, तिनीहरू झन्-झन् बढी नकारात्मक र कमजोर बन्दै गएका छन्, र प्रचारकहरू आत्मिक रूपमा बाँझो बनेका छन्; तिनीहरूसँग प्रचार गर्न केही पनि छैन। हामी सबैलाई हामीले पवित्र आत्माको काम गुमाएका छौं भन्‍ने लाग्छ। हामीले पवित्र आत्माको काम हुने मण्डली सबैतिर खोजेका छौं, तर हामीले प्रत्येक मण्डली उजाड पाएका छौं। किन हरेक सम्प्रदाय यस्तो अनिकालमा परेको छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
मण्डलीहरू उजाड हुनुका कारण सम्‍बन्धी प्रश्‍नोत्तरहरू
विगत केही वर्षदेखि हाम्रो मण्डली झन्-झन् उजाड हुँदै गएका छन्। दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरूले आफ्नो विश्‍वास र प्रेम गुमाइरहेका छन्, तिनीहरू झन्-झन् बढी नकारात्मक र कमजोर बन्दै गएका छन्, र प्रचारकहरू आत्मिक रूपमा बाँझो बनेका छन्; तिनीहरूसँग प्रचार गर्न केही पनि छैन। हामी सबैलाई हामीले पवित्र आत्माको काम गुमाएका छौं भन्‍ने लाग्छ। हामीले पवित्र आत्माको काम हुने मण्डली सबैतिर खोजेका छौं, तर हामीले प्रत्येक मण्डली उजाड पाएका छौं। किन हरेक सम्प्रदाय यस्तो अनिकालमा परेको छ?
अघिल्लो: सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली हालैका वर्षहरूमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र धार्मिक समुदायको उन्मत्त विरोध र निन्दाबाट पीडित भए पनि, यो मण्डलीले धेरैभन्दा धेरै अनलाइन फिल्महरू र परमेश्‍वरको गवाही दिने भिडियोहरू उत्पादन गरिरहेको छ भन्‍ने म देख्छु। यी चलचित्रहरू र भिडियोहरूको सामग्री वृद्धि भइरहेका छन्, र प्राविधिक रूपमा ती अझ बढी उत्कृष्ट हुँदैछन्। यी उत्पादन गरिएका सङ्गतिका सत्यताहरूले मानिसहरूलाई अविश्‍वसनीय रूपमा वृद्धि गराउँछन्। सम्पूर्ण धार्मिक समुदायले हालैका वर्षहरूमा परमेश्‍वरको कामको गवाही दिने यतिको कुनै असल फिल्महरू उत्पादन गरेका छैनन्। अहिले सबै धर्महरू र सम्प्रदायहरूबाट परमेश्‍वरमा साँचो विश्‍वास गर्ने धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डलीमा सामेल भएका छन्। अरू सबै धार्मिक समुदायहरू यति उजाड भइरहेको बेला सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली किन बढ्दै गइरहेको छ?
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली हालैका वर्षहरूमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र धार्मिक समुदायको उन्मत्त विरोध र निन्दाबाट पीडित भए पनि, यो मण्डलीले धेरैभन्दा धेरै अनलाइन फिल्महरू र परमेश्‍वरको गवाही दिने भिडियोहरू उत्पादन गरिरहेको छ भन्‍ने म देख्छु। यी चलचित्रहरू र भिडियोहरूको सामग्री वृद्धि भइरहेका छन्, र प्राविधिक रूपमा ती अझ बढी उत्कृष्ट हुँदैछन्। यी उत्पादन गरिएका सङ्गतिका सत्यताहरूले मानिसहरूलाई अविश्‍वसनीय रूपमा वृद्धि गराउँछन्। सम्पूर्ण धार्मिक समुदायले हालैका वर्षहरूमा परमेश्‍वरको कामको गवाही दिने यतिको कुनै असल फिल्महरू उत्पादन गरेका छैनन्। अहिले सबै धर्महरू र सम्प्रदायहरूबाट परमेश्‍वरमा साँचो विश्‍वास गर्ने धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डलीमा सामेल भएका छन्। अरू सबै धार्मिक समुदायहरू यति उजाड भइरहेको बेला सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वरको मण्डली किन बढ्दै गइरहेको छ?